Anuz Kulung's Blog: नेपालमा अल्टिमेट साइकलर
नेपालमा अल्टिमेट साइकलर
अल्मिेट साइकलर एउटा स्वरोजगारको माध्यम हो । कुनै पनि काम गर्नलाई केहि न केहि जोखिम उठाउनु आवश्यक छ । तर अल्टिमेट साइकलर बिना जोखिमको काम हो । इन्टरनेटको माध्यमबाट तपाईले यो प्रोगामलाई सहज तरिकाले उपयोग गरेर आर्थिक उपलब्ध गर्न सक्नुहुन्छ ।
अमेरिकाको राजधानी न्युयोर्कमा यसको मुख्य कार्यलय रहेको यो कम्पनीको संस्थापक पेटर वोल्फिङ हुन् । यो प्रोगाम मल्टिप्लेक्स इन्टरनेश्नल कोअपरेशनमार्फत ल्याएको प्रोगाम हो । १४ बर्षसम्म आफ्नो कम्पनीलाई बिश्वसामु मुर्तरुप दिएका पेटरले आफ्नो कम्पनीलाई ए ग्रेडको स्तरमा स्थापित गरिसकेको छ । पेटरलाई अनलाइन बिजनेश टुल्स म्यान भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ ।
अल्टिमेट साइकलरका अलावा मल्टिप्लेक्स ले अन्य प्रोगामहरु पनि अगाडि ल्याउदै आएको छ । पछिल्लो पटक इन्टरनेट बिजनेश कम्पनीहरुले आफ्नो प्रोगामहरु बिस्तारित रुपले बिश्वसामु ल्याइरहेको पाइन्छ । जस्तो कि गुगलले युट्युब, ब्लगर, प्लस प्रोफाइल, जिमेल अनि एडसेन्स एड जस्ता कैयौ प्रोगामहरु हामीमाझ ल्याएकै छ । जसले सबै जनताहरुले यो प्रोगामहरुको उपभोग गरेर अनेक अनेक फाइदाहरु लिइरहेको पाईन्छ ।
फेसबुकको प्रोगामले गर्दा आज बिश्वको हरेक मान्छे छिनभरमै सम्पर्कमा जाडिन सक्छ । यसले के देखाउछ भन्दा खेरी इन्टरनेटको उपयोगीता जति बढ्दै गएको देखिन्छ उति नै जनताहरुलाई फाइदा पु¥याइरहेको हामी सहजै नियाल्न सक्छौ । इन्टरनेटलाई जति सकरात्मक रुपले प्रयोग गर्न सकियो उत्ति नै हरेक ब्यक्तिमा फाइदाजनक छ । तर नकरात्मक तरिकाले प्रयोग गर्न सिक्यौ भने यसले नराम्रो बाटोमा पनि उत्तिकै लैजान्छ ।
जस्तो उदाहरणका लागि तपाई हरेक समय इन्टरनेटमा पोर्न तस्बीरहरु, पोर्न भिडिओहरु अनि अनावश्यक अस्लील च्याटहरुमात्र गर्न तिर लाग्नुभयो भने तपाईको जिबनमा उपलब्धी भनेको एकदम कम आउछ । तर त्यो समयमा तपाई कुनै कम्पनीको प्रोफाइलमात्रै अध्ययन गरेर काम गर्न सिक्नुभयो भने तपाईलाई फाइदा पनि उत्तिकै छ ।
फलस्वरुः अल्टिमेट साइकलर पनि एक त्यस्तो प्रोगाम हो । जो अनलाइनमा बसेर डलर कमाउन चाहन्छन् । माउस चलाएर काम गर्न चाहन्छन् । स्काइप तथा टिमभिउरको उपयोग गरेर काम गर्न चाहन्छन् त्यो ब्यक्तिहरुको लागि यो प्रोगाम अत्यन्तै लाभदायक छ ।
मार्केटिङ गुरु नै अल्टिमेट साइकलर हो ।
मार्केटिङ भन्नेबित्तिकै हाम्रा नयाँ यूवाहरुमा एक प्रकारको उकुशमुकुश पैदा भएको होला । नाक खुम्च्याउने र कामलाई हेयको दृष्टिले हर्ने कारणले गर्दा असफल बन्ने गरेका हाम्रा यूवा साथीहरुलाई यो शब्दप्रति निकै चिन्ता लाग्छ । यसको एउटै कारण हो मार्केटिङ बिषयमा अध्ययन नरहेकोले । यो बिषयमा राम्रो चासो र अध्ययन हुने हो भने काम गर्न जटिल कति पनि छैन । कुनै पनि ग्राहकलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने बिषयमा राम्रो अध्ययन गर्न जानियो र त्यसलाई कार्यन्वयन गरियो अनि धैर्यता गर्न सकियो भने यो ब्यवसाय निकै राम्ररी फस्टाउन सक्छ ।
मार्केटिङमा हरेक क्रियाकलापहरु हुन्छ । जहाँ बस्तु बिक्रि हुनु र किन्नु प्रबृतिलाई मात्र मार्केटिङ भनिन्न । एउटा बस्तु उत्पादन किन हुन्छ ? बस्तु उत्पादन भएपछि त्यसले ग्राहकलाई के फाइदा पुग्छ र यसको प्रयोग किन गरिन्छ ? यहि बिषयतिर केन्द्रित भएर बजारमा उत्पादकले बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्छ ।
अल्टिमेट साइकलर पनि एउटा सानो इकाइ मान्छौ हामी । वास्तवमा अल्टिमेट साइकलरले सबै ब्यक्तिको लागि धेरै कम मुल्यमा धेरै किसिमका फाइदा दिने किसीमको कार्यहरु गरिराखेको देखिन्छ । अल्टिमेट साइकलरका अलावा अन्य धेरै बिजनेशहरु पनि हामी माझ छ । तर पनि अल्टिमेट साइकलर अरुको तुलनामा थोरै जोखिममा धेरै कामहरु गर्न सकिने हुनाले हामी यो कार्य अगाडि बढाउदै छौ ।
अल्टिमेट साइकलर कसको लागि बढि उपयुक्त हुन्छ ?
यदि तपाई फेसबुक दैनिक फेसबुक प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईले के को माध्यमबाट फेसबुक प्रयोग गर्नुहुन्छ । हुनसक्छ तपाईले आफ्नो ब्यवसाय प्रबर्धन र मनोरञ्जनको लागि फेसबुक प्रयोग गरिराख्नुभएको छ । फेसबुक, ट्वीटर तथा युट्युबहरु प्रयोग गर्दा तपाईलाइ थाहा छ कि छैन तपाईको पैसा सानो सानो हुदै खर्च भइरहेको छ । जस्तै हामीले कुनै सिमकार्ड प्रयोग गरेर इन्टरनेट प्रयोग गर्दा प्रति केबी, प्रतिजीबी सिममा रिचार्ज गर्नैपर्छ । प्रत्येक जीबी हामीले इन्टरनेट खपत हामीबाट भइरहदा त्यति नै पैसा गइरहेको हुन्छ । त्यो पैसा अधिकांश नेपाल बाहिर नै गइरहेको पाइएको छ ।
आज हरेकको मोबाइलमा इन्टरनेट प्रयोग हुन्छ । मान्नुस् प्रतिसेकेन्ड नेपालीले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल इन्टरनेटबाट कति पैसा बाहिर गइरहेको छ ।
त्यसो त इन्टरनेटको प्रयोग गरेर आम्दानी गर्नेहरु पनि नभएका होइन । सामान्य रुपमा भन्ने हो भने साइबर चलाएर पनि कतिले काम गरिरहेकै छन् । तर नेपालको लोडसेडिङको प्रभावले त्यसलाई पुर्णता दिन सकेको छैन ।
इमेल मार्केटिङ तथा अनलाइन वर्क एबम सोसल मिडियामार्फत काम गरेर केहि काम गर्न सकिन्छ । आम्दानी गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि पुर्ण रुपमा तालिम लिनु आवश्यक हुन्छ । सिक्नु पर्छ । तपाई सिक्न सक्नुहुन्छ । विभिन्न वेबिनार र सेमिनारहरुमार्फत ।
१००० जना यूवाहरुलाई यस ब्यवसायमा सक्रिय बनाउने र होम बेस बिजनेश तथा आउटसोर्सको काम नेपालमा भित्राउने ।
१.अनलाइन एजुकेशनको प्रचार प्रसार गर्ने ।
२.बिना जोखिम होम बेस बिजनेश भित्राउने ।
३.यूवाहरुलाई अनलाइन मार्केटिङको बिषयमा सचेत गराउने ।
४.स्वरोजगार उपलब्ध गराउने ।
देशको १० देखि २० जिल्लाहरुमा कमसेकम ५० देखि १०० जनासम्मको यूवाहरु भेला गरेर नेपालभरी १००० जना यूवाहरुलाई स्वरोजगार दिने ।
अनलाइन बिजनेशको सहि प्रचार प्रसार गर्नु र नेपालमा यसलाई स्थापित गराउनु हाम्रो प्रयाश हो । नेपालमा बजार बिस्तारलाई नयाँ रुप पनि दिनु सिक्नुपर्छ र हरेक यूवाहरुले केहि न केहि प्रगतिउन्मुख काम गरोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
जम्मा २५ डलरबाट सुरु गर्नुस् तपाईको अनलाइन ब्यापार ।
Posted by Pokhara News at 1:55 AM